Ezweni lanamuhla, akulona nzima kakhulu ukudala imishini ethile ephezulu ehlangene emafektheleni ngezandla zomuntu siqu. Abantu abaningi bayakwazi ukwenza amadivaysi ahlukahlukene kakhulu futhi athakazelisayo ngezandla zabo. Into eyinhloko ukwazi ukuthi yiziphi izingxenye zedivayisi eziqukethe. Kubalulekile futhi ukuqonda imigomo yomsebenzi. Ngakho ungakwazi ukuqoqa ifoni ephathekayo, umshini wokuwasha noma imoto. Yiqiniso, singakhuluma ngogwayi we-elektroniki. "Ungenza kanjani ugwayi we-elektroniki?" - umbuzo awuyinkimbinkimbi kakhulu. Kulesi sihloko sizobhekana nalokhu. Uma othile engafuni ukwakha ugwayi wezandla ngezandla zakhe, mhlawumbe lesi sihloko sizomsiza ukuba alungise ugwayi we-elekthronikhi.
Ngogwayi we-elekthronikhi, kunezingxenye eziningana ezithintekayo ukwakha. Izingxenye eziyinhloko zingabizwa ngokuthi i-microchip, i-cartridge ekhishwayo, i-atomizer, nebhethri. Ungathenga lezi zingxenye ngokudayiswa kwamahhala kokubili ezitolo ezivamile nasesikhala se-intanethi.
Ngaphezu kwalokho, kunesidingo sokuthenga icala ngokwayo. Wena-ke, ungakwenza lokho ngokwakho, kodwa uma uthengisa icala elenziwe efektri, khona-ke amathuba okuphuza into enjengokubhema ugwayi we-elekthronikhi ozozenza yinto encane, futhi izobukeka enhle kakhulu.
Amagama ambalwa mayelana ne-atomizer
Abaqalayo abaningi ukubhema ugwayi kagesi bazibuze: "Iyini i-atomizer?" Ngokuyinhloko i- evaporator yama-cigarette kagesi. Uketshezi olukhethekile luvutha (lugwayi ugwayi ngokwalo) ngokushesha lapho kuvela isimo sokukhuphuka. Lokhu kunjalo: i-refueling idliwe nge-cartridge ibe yi-evaporator ngokwayo yegwayi kagesi, okungukuthi, i-atomizer. Kukhona inqubo yokushisa, eyenziwa ngosizo lwe-nichrome spiral.
Ngaphezu kwalokho, ngokuqondile eceleni kwe- nichrome spiral , i-wicket-atomizer ngokwayo iqukethe i-wick, metal, kanye nekhamera ye-ceramic. I-liquid iyadlula ku-wick, futhi isuka kuyo - ngqo ku- nichrome spiral, ebeka indebe eyenziwe ngezingcwecwe.
Ukuqhubeka kulokhu, sidinga ukwakha into enjengokubhema ugwayi we-electronic, intambo ye-nichrome, icala lebhethri (ungasebenzisa i-flashlight), i-wick, futhi kungcono ukusebenzisa intambo ye-silika. Ngaphezu kwalokho, udinga icala le-atomizer futhi, ngaphezu kwalokho, ibhethri ye-lithium-ion enebhodi lokuzivikela elinomthamo we-3.7 Volts. Ngakho-ke, ugwayi we-electronic ngezandla zakhe uqoqwe ngokuphelele kusuka enani elincane lezingxenye.
Indlela yokwenza ugwayi kagesi?
Ukubuza mayelana nendlela yokwenza ugwayi ngogesi ngesandla, ababhemayo kufanele baxoxe nemiyalo. Ake sinikeze.
Kulesi simo, injini eyinhloko yogesi ku-cigaretta eyenziwe ngokwabo kufanele ibhethri. Ngokuvamile le ngxenye isendaweni ehluke ngokuphelele ye-cartridge. I-microchip kufanele ifakwe ngemuva kwebhethri.
Ixhuma ibhethri nedivayisi ye-atomizer ngokwayo. Kodwa kubalulekile ukunamathela ngokuqinile i-cartridge ku-atomizer. Ngokushesha nje lapho ukuqina kuqhubeka, ngokwemfundiso, ibhethri iqala ukunikeza i-atomizer yamandla, ngakho-ke iyakushisa. Ngenxa yalokho, uketshezi okhokhelwe ngaphambili uzokhuphuka. Yini edingekayo ukuze le nqubo iqinisekiswe ugwayi owenziwe nge-elektroniki?
Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukuxhuma othintana nabo abalungile nababi bebhethri ezifweni ezifanele emzimbeni we-atomizer ngokwayo, okwathi, ngemva kwalokho, isilonda sezintambo ze- nichrome macala nxazonke . Udinga ukufaka i-wick kuso. Endabeni ye-atomizer yakho ethengile, udinga ukwenza imbobo encane. Lo mgodi kufanele usebenze ukuncelisa emoyeni. Ngenxa yalokho wonke umsebenzi, uketshezi kufanele kuqhumeke ngokufudumala, bese kuphazamiseka njengokungathi kuvela kugwayi evamile.
Ukwenza izindlu ezenziwe ngokwabo
Ukuze ugwayi wakho owenziwe nge-elektroniki ubheke kahle, kuzodingeka wenze umzimba wakho siqu. Njengoba kushiwo ngenhla, ungayithenga esitolo, kodwa ungayenza ngokwakho.
Yenza ukusika kwesibhubhu sekhadibhodi. Ukuchotshozwa kufanele kudlule lonke ubude. Manje usethe ububanzi be-tube yakho. Kufanele kube njalo ukuthi amabhethri angeniswa ngaphandle komzamo omkhulu. Bese usetha ubude bamabhethri afanelekile, bese udweba i-loop kusuka phansi kwecingo bese uyiqinisa ebhodini lokugoba noma glue. Ekuphetheni, udinga ukugoqa ingxenyeni engenhla ye-tube nge-band elastic.
Ungakwazi ukufaka ibhethri embumbini eyenziwe. Kuyo kusukela ekuqaleni uxhume ucingo ukuze i-minus iqondiswe phansi. Intambo ngokwayo idinga ukufakwa ngendlela ekhethekile. Isigqoko salo kufanele siphume phezulu kusuka ebhokisini lekhadibhodi. Ungacindezela isiqeshana usebenzisa i-band elastic. Faka amabhethri asele ezindlini ngendlela efanayo lapho ufaka ibhetri lokuqala.
Ngingayithola kuphi i-liquid?
Ukuze wenze into enjengokubhema ugwayi ogcwele, ngezandla zakho, uzodinga uketshezi kudivayisi yakho. Kudingekile ukuthi lokhu kutholakale isisekelo esikhethekile sokuphumula. Ukwakhiwa kwale nhlanganisela kubandakanya: i-propylene glycol, engakwazi ukuzikhethela indawo yeglycerin yemifino, amanzi aphihliwe. Uma umnikazi wedivaysi enesithakazelo, ukwakhiwa ketshezi kungabandakanya i-nicotine, kodwa ugwayi owenziwe nge-elektroniki, kanye nokwamanje, uvumela umuntu ukuba athumele ngaphandle kokusebenzisa i-nicotine, noma ukuyisebenzisa okungenani.
Ezitolo ungathola izinhlobonhlobo zephunga elizokhetha kuzo. Yiqiniso, ngalokhu kuzodinga isitolo esikhethekile, okuyinto elula kakhulu ukuthola kwi-Inthanethi uma engekho edolobheni lakho. Ngosizo lwephunga, umuntu obhemayo unikezwa ithuba lokudala izindlela zakhe zokubhema kagesi, ukushintsha ukulinganiswa kwalabo noma ezinye izingxenye, ukuxuba uketshezi kulezi zinguqulo ukuthi empeleni umnikazi wegwayi uthanda.
Izinzuzo kanye nokuqapha
Izinzuzo eziyinhloko kagwayi kagesi yilokho akukho i-tar nama-carcinogens, nokuthi ugwayi awushisi lapho ugwaya, ngaphandle kokuzihlukanisa ngamakhemikhali amakhemikhali ayizinkulungwane ezine futhi ungabi usongo lomlilo. Ngaphezu kwalokho, ayikungcolisi imvelo, isebenza phezu kwamazinga ahlukahlukene okushisa, futhi izinga lokushisa komusi ngokwalo liseduze nomzimba womuntu.
Idivaysi ye-elekthronikhi isebenzisa isikrini sombane, futhi ngenxa yalokho ayikhiqiza imisebe ye-electromagnetic. Ngaphezu kwalokho, njengoba kushiwo ngenhla, kukhona i-nicotine encane kakhulu kulo ehlukumeza abantu. Kuzo zonke iziqukathi kukhona uketshezi ezingaphansi kuka-20 ugwayi ovamile.
Kubaluleke kakhulu ukukhumbula ukuthi ngisho nogwayi we-elekthronikhi awunakulungele izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18, futhi ngokuvamile kubantu abangenawo umkhuba wokubhema. Ukwengeza, uma umuntu ehlaselwa ku-nicotine noma yiziphi izingxenye eziqondile ze-aerosol, akufanele asebenzise le divayisi.
Inkumbulo ngokumangala: amantongomane nokubikezela nezifiso
I-grates yensimbi iyisici esibalulekile samachibi kanye nezindawo zomlilo.
Tales ngoba omncane kunathi: Yimani imvuthu
Yini okumele uyenze uma ingane yakho iluma izingane
Okuvusa usinga eziphezulu ezingaqondakali: Uhlu, incazelo, ukubuyekezwa nezilinganiso